ပြင်းထန်လွန်းတဲ့နေရောင်ခြည်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကို ဘယ်လိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမလဲ ? - For her Myanmar
နဂိုအသားအရေပြန်ရဖို့ အဆင့် (၅) ဆင့် ပဲလိုတယ်နော်
ယောင်းတို့ရေ … အခုက နွေခေါင်ခေါင်မှာ ရာသီဥတုကလည်းပူ သင်္ကြန်ကလည်းကျပြီဆိုတော့ ရေစိုစိုနေပူပူနဲ့ အသားအရေတွေ ပျက်စီးလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။ ဒီလိုနေဒဏ်ရေဒဏ်ကြောင့် နေလောင်ပြီး အသားအရေပျက်စီးတာတွေကို ပြန်ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့်လေးတွေကို သုံးကြည့်ကြတာပေါ့။
(၁) Sunscreen (နေရောင်ကာဆေး) သုံးပါ
အသားအရေကို ထိခိုက်စေတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကို အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တာ SPF 30+ နဲ့ PA +++ ပါတဲ့ sunscreen တွေပါ။ နေလောင်ထားတဲ့အသားအရေကို ထက်ပြီးအခြေအနေဆိုးမသွားစေချင်ရင် နေပူထဲထွက်တဲ့အခါတိုင်း sunscreen ကို မဖြစ်မနေလိမ်းပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
(၂) ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပါ
အသားအရေပေါ်မှာ ဆဲလ်သေတွေရှိရင် ညစ်ထေးထေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ မျက်နှာကို exfoliate လုပ်ပေးပါ။ AHA (alpha hydroxyl acid) ပါတဲ့exfoliating product တွေက ယောင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွတ်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါ scrub လုပ်ပေးပါ။
အသားအရေကြည်လင်လာဖို့ တစ်နေ့ကို ရေ (၈)ခွက် သောက်ပေးရမယ်ဆိုတာကတော့ ယောင်းတို့အားလုံးသိကြမှာပါ။ ရေသောက်ရုံပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ mositurizer တွေ serum တွေ သုံးရဦးမယ်။ ခြေတွေ လက်တွေအတွက် hand cream တစ်ခုခုသုံးပေးဖို့လိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် body lotion သုံးပေးပါ။ ဒါမှ ယောင်းရဲ့ နေလောက်ဒဏ်ခံထားရတဲ့ အသားအရေကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်မှာပေါ့။
(၄) ဓာတုပစ္စည်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ
ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုပမာဏများတဲ့ skincare တွေက ယောင်းရဲ့အသားအရေကို ပျက်စီးစေနိုင်တာမို့လို့ ဖြစ်နိုင်ရင် သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ organic skincare တွေကိုပဲ သုံးစေချင်ပါတယ်။ အခု Stella မျက်စိကျနေတာကတော့ Ame Aim ဆိုတဲ့ ဂျပန် brand organic skincare လေးပါ။ organic ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် အထိအခိုက်မခံနိုင်တဲ့ အသားအရေအတွက်တောင် သုံးလို့ရပါတယ်။ နေပြင်းပြင်းကြောင့် အထိခိုက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေမှာ Ame Aim ရဲ့ clear lotion ကို မိတ်ကပ် (သို့) သနပ်ခါး မလိမ်းခင်လေး အောက်ခံ skincare အနေနဲ့ သုံးထားပေးလိုက်ရင် သူက ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေကို အတွင်းထဲထိ ပြုပြင်ပေးပါတယ်။ နှင်းဆီအစစ်ရဲ့ ပေါင်းခံရည်ကို သုံးထားတာကြောင့် လိမ်းတဲ့အခါမှာ နှင်းဆီနံ့မွှေးမွှေးလေးအရင်ရပါလိမ့်မယ်။ အသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတေ့ာ ခပ်အေးအေးလေး ဖြစ်သွားတာကို ခံစားရတာကြောင့် နေပူလောင်ထားတဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဝက်ခြံသမားတွေအတွက်လည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ Ame Aim Myanmar အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ပေ့ခ်ျမှာလည်း သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ (အခု Ame Aim မှာ clear lotion ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒစ်စကောင့် ချထားတယ်နော် ယောင်းတို့ )
အပေါ်ကနည်းတွေအကုန်လုပ်ပါရဲ့ … အစားအသောက်ပုံစံမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း အသားအရေက လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ပြုပြင်လို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ အစားအသောက်ကိုလည်း ဗီတာမင်စီ၊ ကော်လဂျင် နဲ့ Antioxidant တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အသီးအနှံတွေကို တတ်နိုင်သမျှ များများစားပေးပါ။
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရေကို ဘယ်လိုပြန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာသိကြပြီပေါ့နော်။ ကတော့ နည်းလမ်းတွေ ပြောပြပေးထားပြီ လိုက်နာဖို့ကတော့ ယောင်းတို့တာဝန် အိုကေ ?
နဂိုအသားအရပွေနျရဖို့ အဆငျ့ (၅) ဆငျ့ ပဲလိုတယျနျော
ယောငျးတို့ရေ … အခုက နှခေေါငျခေါငျမှာ ရာသီဥတုကလညျးပူ သွင်ျကနျကလညျးကပြွီဆိုတော့ ရစေိုစိုနပေူပူနဲ့ အသားအရတှေေ ပကျြစီးလိုကျမယျ့ဖွဈခွငျး။ ဒီလိုနဒေဏျရဒေဏျကွောငျ့ နလေောငျပွီး အသားအရပေကျြစီးတာတှကေို ပွနျပွုပွငျဖို့ဆိုရငျတော့ ဒီအဆငျ့လေးတှကေို သုံးကွညျ့ကွတာပေါ့။
(၁) Sunscreen (နရေောငျကာဆေး) သုံးပါ
အသားအရကေို ထိခိုကျစတေဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျတှကေို အထိရောကျဆုံးကာကှယျပေးနိုငျတာ SPF 30+ နဲ့ PA +++ ပါတဲ့ sunscreen တှပေါ။ နလေောငျထားတဲ့အသားအရကေို ထကျပွီးအခွအေနဆေိုးမသှားစခေငျြရငျ နပေူထဲထှကျတဲ့အခါတိုငျး sunscreen ကို မဖွဈမနလေိမျးပေးဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။
(၂) ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပါ
အသားအရပေျေါမှာ ဆဲလျသတှေရှေိရငျ ညဈထေးထေးဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးဖို့ မကျြနှာကို exfoliate လုပျပေးပါ။ AHA (alpha hydroxyl acid) ပါတဲ့exfoliating product တှကေ ယောငျးရဲ့မကျြနှာပျေါက ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး အသားအရကေို နူးညံ့ခြောမှတျစပေါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကိုတော့ တဈပတျတဈခါ scrub လုပျပေးပါ။
အသားအရကွေညျလငျလာဖို့ တဈနကေို့ ရေ (၈)ခှကျ သောကျပေးရမယျဆိုတာကတော့ ယောငျးတို့အားလုံးသိကွမှာပါ။ ရသေောကျရုံပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးဘူး။ အရပွေားအတှငျးပိုငျးအထိ စိမျ့ဝငျနိုငျတဲ့ mositurizer တှေ serum တှေ သုံးရဦးမယျ။ ခွတှေေ လကျတှအေတှကျ hand cream တဈခုခုသုံးပေးဖို့လိုပွီး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ body lotion သုံးပေးပါ။ ဒါမှ ယောငျးရဲ့ နလေောကျဒဏျခံထားရတဲ့ အသားအရကေို အမွနျဆုံးပွုပွငျနိုငျမှာပေါ့။
(၄) ဓာတုပစ်စညျးတှကေို တတျနိုငျသမြှရှောငျပါ
ဓာတုပစ်စညျးပါဝငျမှုပမာဏမြားတဲ့ skincare တှကေ ယောငျးရဲ့အသားအရကေို ပကျြစီးစနေိုငျတာမို့လို့ ဖွဈနိုငျရငျ သဘာဝပစ်စညျးတှနေဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ organic skincare တှကေိုပဲ သုံးစခေငျြပါတယျ။ အခု Stella မကျြစိကနြတောကတော့ Ame Aim ဆိုတဲ့ ဂပြနျ brand organic skincare လေးပါ။ organic ဆိုတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အထိအခိုကျမခံနိုငျတဲ့ အသားအရအေတှကျတောငျ သုံးလို့ရပါတယျ။ နပွေငျးပွငျးကွောငျ့ အထိခိုကျမခံနိုငျဖွဈနတေဲ့ အသားအရမှော Ame Aim ရဲ့ clear lotion ကို မိတျကပျ (သို့) သနပျခါး မလိမျးခငျလေး အောကျခံ skincare အနနေဲ့ သုံးထားပေးလိုကျရငျ သူက ပကျြစီးနတေဲ့ အသားအရကေို အတှငျးထဲထိ ပွုပွငျပေးပါတယျ။ နှငျးဆီအစဈရဲ့ ပေါငျးခံရညျကို သုံးထားတာကွောငျ့ လိမျးတဲ့အခါမှာ နှငျးဆီနံ့မှေးမှေးလေးအရငျရပါလိမျ့မယျ။ အသားထဲ စိမျ့ဝငျသှားတဲ့အခါမှာတေ့ာ ခပျအေးအေးလေး ဖွဈသှားတာကို ခံစားရတာကွောငျ့ နပေူလောငျထားတဲ့သူတှအေတှကျ တျောတျောအဆငျပွပေါတယျ။ ဝကျခွံသမားတှအေတှကျလညျး တျောတျောကောငျးပါတယျ။ Ame Aim Myanmar အကွောငျး အသေးစိတျကို ပခြေျ့မှာလညျး သှားကွညျ့နိုငျပါတယျနျော။ (အခု Ame Aim မှာ clear lotion ကို ၃၀ ရာခိုငျနှုနျး ဒဈစကောငျ့ ခထြားတယျနျော ယောငျးတို့ )
အပျေါကနညျးတှအေကုနျလုပျပါရဲ့ … အစားအသောကျပုံစံမမှနျဘူးဆိုရငျလညျး အသားအရကေ လှယျလှယျနဲ့ပွနျပွုပွငျလို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ အစားအသောကျကိုလညျး ဗီတာမငျစီ၊ ကျောလဂငျြ နဲ့ Antioxidant တှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှနေဲ့ အသီးအနှံတှကေို တတျနိုငျသမြှ မြားမြားစားပေးပါ။
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး နရေောငျကွောငျ့ပကျြစီးနတေဲ့အသားအရကေို ဘယျလိုပွနျပွုပွငျထိနျးသိမျးရမယျဆိုတာသိကွပွီပေါ့နျော။ ကတော့ နညျးလမျးတှေ ပွောပွပေးထားပွီ လိုကျနာဖို့ကတော့ ယောငျးတို့တာဝနျ အိုကေ ?
Tags: Beauty, skincare, sun damaged, tips
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကခုန်ပြီး ဝိတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတာ Zumba အားကစားက သက်သေပါပဲ။
Stella April 10, 2019